करोडको थेगो "काली तिरैमा" दुर्गा बि. सि. र सुनिता बुढा - NEPALI KALAKAR
औंसीको रात यसै पनि अन्धकार अनि चारैतिर सन्नाटा, मस्त निदाएको बस्ती । तिमी हिडेको दिन देखि नै गायब भएको आँखाको निद, म कसरी निदाउँ ? आफ्नै सुरमा सललल बगेको काली नदीको तिरमा बसेर, तिमीलाई सम्झदै कति रोए कति । काली नदीको चिसो सिरेटोले सिरिङ्ग पार्दा तिम्रो अङ्गालोमा बाँधिएर बाँकी जीवन तिमीलाई सुम्पन्छु भनेर गरेको बाचा सम्झेर रोए । म फर्किहाल्छु है सानी भनेर मिर्मिरेमा परेला भरी आँसु पार्दै तिमी बिदाइ भएको बिहान सम्झेर रोए । समय निर्दयी बनेर कतै मन भित्र फुल्दै गरेको यो मखमली माया बाध्यताको हुरीले तहस नहस पार्ने हो कि भन्ने चिन्ताले रोए । छोरा मान्छेको मन, शहरको झिलिमिली सङ्गै कतै रङ्गीन दुनियाँमा हराएर मलाइ भुल्ने हौ कि भने आशंकाले रोए । देवता जस्तो तिमी अनि गङ्गा जस्तो तिम्रो पबित्र मन अनावश्यक शङ्का पो गरें कि भनेर पछुताउदै रोए । सायद बिश्वास नलाग्ला तिमीलाई, जून त थिएन त्यो रात तर जुनकीरीलाई सोध – तिम्रो पर्खाइमा छट्पटिदै कसरी रोइरहेकी थिए । मेरा परेलीका बाटो हुँदै बगेका आँसुहरु कालीमा थपिएर पानीको बेग अझै बढिरहेको छ कि जस्तो भान हुन्थ्यो । जति जोडले म रुन्थें काली पनि उति नै उर्लदै बगे झै लाग्थ्यो । कास, यो नदी सङ्गै बगेर तिम्रो छेउमा लगेर छाडिदिन्थ्यो भने म उहिल्यै काली नदीमा हाम फालिसक्थे ।
यो जुनीमा म तिम्री भइन !
क्यारी भनु म चोखी रहिन !!
काली तिरैमा …
औसींको रात जून थिएन, जुनकिरीलाई सोध, म कति रोइहुम्ला तिम्रो पिरैमा !!!
अहिलेसम्म सुनेका कैयौं मीठा थेगोहरु मध्य मलाई मन परेको एक थेगो – ” काली तिरैमा ” । यो थेगो सुन्नासाथ मेरो मनमा माथी लेखिएका कुराहरु काल्पनिक रुपमा सल्बलाएका थिए । गीत बजारमा आइसके पछि वियोगान्त भिडियोले अझ मर्माहत बनायो ।
लोकदोहोरी क्षेत्रका लागि दुर्गा बि.सि. अब नयाँ नाम रहेन किन कि “मृत्यु पछिको सिन्दुर”, “झ्यालैमा” जस्ता मिलियन भ्युज बटुलीसकेका गीतहरुका कारण दुर्गा बि. सि. ले लोकदोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेका छन् । इजरायलमा प्रवासी जीवन ब्यतित गरिरहेका गायक बि. सि. ले हिजो मात्र डिजिटल मिडियामा नयाँ पन्चेबाजा गीत – “काली तिरैमा” सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नै लय शब्द अनि गायनमा रहेको उक्त गीतमा गायिका सुनिता बुढाले उनलाई साथ दिएकी छिन् । त्यसो त पछिल्लो समयकी चर्चित र लोकप्रिय गायिका हुन् – सुनिता बुढा । उनको जादुमय मखमली आवाजको म पनि ठूलो फ्यान हुँ ।
परदेशमा रहेर पनि नेपाली मौलिक लोक संस्कृतिको जगेर्नामा तल्लिन युवा लोकगायक दुर्गा बि.सि.को सङ्गीत प्रतिको मोह देखेर म पनि प्रभावित हुने गर्दछु । थोपा थोपा पसिनाको पारिश्रमिक बाट जम्मा पारेको पैसा सङ्गीतको क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा हुने त कुनै सम्भावना नै छैन तैपनि आफ्नो नाम र मौलिक लोकसङ्गीतको संरक्षण गर्ने हेतुले चालिएको उनको यो कदम वास्तबमै प्रसंशनिय छ । जति मीठो थेगो उस्तै कारुणिक टुक्काहरु अनि मुटु रेटिने लय, यो त्रिकोणात्मक तालमेलमा उस्तै मीठास गायन – ” काली तिरैमा “। हुन त बढ्दो प्रतिस्पर्धा अनि आधुनिकताले खर्लप्पै खाइसकेको वर्तमान लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा यो गीतले सोचे जति भ्युज नपाउन नि सक्ला तर म दावाका साथ भन्न सक्छु कि – “मौलिक लोकसङ्गीत कहिल्यै ओझेलमा पर्ने छैन, म जस्तै प्रकृतिलाई उपमा दिएर सिर्जना भएका यस्ता गीत सङ्गीत मन पराउने कैयौं दर्शक श्रोताहरु हुनुहुन्छ, जस्का लागि यो गीत सदैव “आहा !!!” बनिरहनेछ” । युवा लोकगायक तथा सर्जक दुर्गा बि.सि.को साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, आगामी दिनहरुमा यस्तै मौलिक सिर्जनाहरु सुन्न र हेर्न पाइयोस् । मेरो ब्यक्तिगत तर्फ बाट “काली तिरैमा” को अपार सफलताको शुभकामना र शुभेच्छा ।